Thwebula USB Show 1.0.0 – Vessoft
Akwazi ukugcina /
Thwebula USB Show
USB Show – a Umbuso elula yokubonisa amafayela ezifihliwe hard drive oshayelayo flash. USB Bonisa uqhuba scan esheshayo ukuhlonza izinkinga ezithile. Isofthiwe ikuvumela ukuba uthola amafayela ezifihliwe yezinkampani ezahlukene ephathekayo zolwazi. USB Bonisa kwakha umbiko ogcwele mayelana nomsebenzi owenziwayo kanye ubonisa bathola amafayela ezisolisayo endaweni umqhubi. Isofthiwe ibusa sakugcina system imithombo futhi has a esibonakalayo elula.
Ukubonisa amafayela ezifihliwe asolisayo
Iskena of hard drive, kanye ngemoto flash
Ukwakha umbiko inqubekelaphambili
Amazwana on USB Show:
USB Show Ahlobene software:
Isofthiwe multifunction ukuba abhale bese uhlela akwazi ukugcina. Isofthiwe inezici eziningi ezengeziwe ukuba zisebenze nalawo idatha akwazi ukugcina.
Imeneja elinamandla umsebenzi ngokugcwele ne-hard drive. Isofthiwe kuhlanganisa amathuluzi for umsebenzi lula nezinhlobo ezahlukene oshayelayo.
AOMEI Partition Assistant 6.5 Standard, Professional, Lite futhi Server
Ithuluzi ukuphatha hard disk ngodonga. Isofthiwe kuhlanganisa amathuluzi ukusebenza nge izindilinga eziyizicaba futhi ikuvumela ukuba adale akwazi ukugcina bootable.
Isofthiwe ukugijima izithombe disk ngaphandle kokusebenzisa idrayivu optical. Isofthiwe kudala oshayelayo virtual ukuthi ncamashí ngokomzimba CD noma DVD oshayelayo.
Isofthiwe ukuhlola isimo kanye nezinga kanzima oshayelayo operability. Isofthiwe ubonisa ulwazi mayelana izinkomba ezahlukene yomsebenzi izindilinga eziyizicaba.
Isofthiwe yakhelwe ukuguqula DVD ku ethandwa ifomethi, DVD yokusekelayo ngezindlela ezahlukene futhi yokuwuthola ukuvikelwa izindilinga eziyizicaba ngokumelene yokukopishwa.
The instrument ukuba defragment idrayivu kanzima futhi amafayela ahlukene. Lokhu kuhlolwa software futhi ubonisa ulwazi mayelana disc.
Ithuluzi elinamandla ukuguqula amafayela ngetakhiwo letehlukene. It isekela ikhono ukulungisa izilungiselelo ngesikhathi ukuguqulwa ifayela.
Onamandla ihluzo umhleli bese uhlela izithombe. Isofthiwe ikuvumela ukulanda imiphumela eyengeziwe futhi amathuluzi ukusebenza ngemifanekiso.
Isofthiwe ukudala ngiyosebenza PDF-files. Isofthiwe isekela kudalwa PDF-files kuleso sicelo equkethe umsebenzi ukuphrinta.
I oluhlanganyele lokuthuthukiswa imvelo nge iqoqo zonke izici ezidingekayo esakheka futhi debugs zokusebenza ze-Android.
Google Chrome 61.0.3163.100, 62.0.3202.38 beta futhi 63.0.3223.8 dev